Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Donny van de Beek Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname "Mardonny". Anyị Donny van de Beek Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, nzụlite ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara nke ọma ụzọ ya na ikike ijigide bọọlụ. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Donny van de Beek's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Donny van de Beek Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Donny van de Beek a mụrụ na 18th ụbọchị nke April 1997 na Nijkerkerveen na Netherlands. Ọ bụ onye mbụ n'ime ụmụ abụọ mụrụ nne ya, Gerdina van de Beek na nna ya, Andre van de Beek.
Ndị agbụrụ Dutch nke agbụrụ agbụrụ si n'ezinụlọ si n'etiti ndị nne na nna pụta ma zụlitere nne na nna na Nijkerkerveen na Netherlands ebe ọ nọ na nwanne ya nwoke nke nta, bụ Rody van de Beek.
Ndị nne na nna ya bụ Gerdina na Andre zụlitere Donny van de Beek.
N'ịbụ onye na-etolite n'ugbo ugbo na Nijkerkerveen, nwa okorobịa Donny na-ebuteghị mbụ banyere football n'oge ọ bụ nwata. Ndị na-eto eto n'oge ahụ na-ahọrọ ịrị elu osisi ma na-etinye oge na ụmụ anụmanụ.
N'otu aka ahụ, Donny nwere mmasị n'ilekọta nnụnụ nke ezinụlọ ya, a mmepe nke hụrụ ya mgbe ọ na-eji obi ike arịgo n'elu ụlọ nke ugbo ahụ site na osisi na ntupu.
Donny van de Beek Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ - Ọzụzụ na Ọrụ Buildup:
Donny na-erughi afọ ise mgbe ọ malitere ịmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ na-akpọghị na Nijkerkerveen. Mgbe a nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, a kọwara nwata ahụ dịka nwata nke dị jụụ nke na-ejide onwe ya, ọ bụghị ihere dị ka di ya.
Ka ọ na-erule oge Donny dị afọ anọ, nna ya Andre kpọọrọ ya ka ọ lee egwuregwu bọọlụ na ama egwuregwu Ajax. Ozugbo Donny nwere mmasị na egwuregwu ahụ ma mesịa debanye aha ya na ụmụ nwanyị Veensche Boys.
Donny Van De Beek dị obere mgbe nna ya buuru ya na-ele egwuregwu egwuregwu. Ebe E Si Nweta: Instagram.
N'icheta ụbọchị mbụ nke Donny na ọzụzụ na Veensche Boys, nna ya Andre gosipụtara na: "Donny mere nke ọma n'oge ọzụzụ ahụ wee mee ka ịme egwuregwu ahụ bụrụ ihe kacha mkpa ya n'ụbọchị ahụ".
Donny van de Beek Bio - Ndụ Mmalite Ndụ na Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ bụ na Veensche Boys na nwata na Donny nwere obi ụtọ jiri afọ ole na ole na-amanye nkà ya na football yana ịmara otú e si eme ka ihe na-egbuke egbuke bụ àgwà nke ụdị egwuregwu ọ dị ugbu a.
N'oge na-adịghị anya, arụmọrụ nke nwatakịrị ahụ kpebisiri ike ime ka ụlọ klọb dị elu gụnyere Ajax kwenyere na nwata ahụ dị afọ iri na otu na ụlọ akwụkwọ mmuta ha dị elu n'afọ 2008.
Donny van de Beek Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Mgbe usoro ntorobịa nke Ajax, Donny ji nwayọọ nwayọọ bilie n'ọkwá ma guzosie ike dịka otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ nwere olile anya, mmepe nke mere ka ọ bulie ndị otu Ajax mbụ na 2014.
Ọ bụ ezie na Donny mere nanị 6 anya maka Ajax n'oge mbụ ya, ọ nọgidere na-enwe ọganihu ma malite idekọ anya n'ihu site n'afọ 2016. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Donny van de Beek nọ na-edekọ anya mgbe niile maka Ajax kemgbe 2016.
Donny van de Beek nọ na-edegharị anya mgbe nile maka Ajax kemgbe 2016. Ebe E Si Nweta: Youtube.
Donny van de Beek's na Marijn van Eijkelenbur Storyhụnanya Akụkọ:
Nwunye na-aga ịlụ di na nwunye n'oge ederede. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara akụkọ nwoke na nwoke na nwanyị na-enwe mmekọrịta ndụ ya ugbu a. Iji malite, a maghị Donny na ọ nọ na mmekọrịta ọbụla tupu ya ezute enyi ya ogologo oge, Marijn van Eijkelenburg.
Donny van de Beek na foto a hụrụ n'anya na enyi ya nwanyị Marijn.
Ndị na-ahụ maka ịhụnanya nke si n'otu obodo ahụ nwere mmasị ịhụnanya n'oge ha dị afọ iri na ụma ma nọgidere na-abụ otu ụzọ ahụ kemgbe. Ka ọ dịgodị, Donny enweghị nwa ma ọ bụ nwa (s), mmepe nke nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ya na Marijn na-eme mmekọrịta na ọkwa ọzọ.
Donny van de Beek Ndụ Ezinụlọ:
A mụrụ Donny van de Beek n'ime ezinụlọ nke mmadụ anọ anyị na-agwa gị ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere Donny van de Beek Nna:
Andre van de Beek bụ nna Donny. Ọ bụ ezie na Andre abụghị onye na-egwu egwuregwu bọọlụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi nke Veensche Boys na a na-enye ya otuto maka ịme nwa ya Donny ka ọ bụrụ football mgbe ọ dị afọ 4. Nna na-akwado nke abụọ nwere ezigbo mmekọrịta na Donny ma na-eje ozi dị ka onye nchịkwa ya na-enweghị ọrụ.
Donny van de Beek na nwata ya na Andre nna ya. Ebe E Si Nweta: Veenscheboys.
Banyere Donny van de Beek's Mother:
Gerdina van de Beek bụ mama Donny. Ọ na - enwe mmekọrịta dị mma na Dony ma na - enwe obi ụtọ ịkọkọrịta nkọwa nke akụkọ ọgụgụ isi nwata na nwata. N'adịghị ka ọtụtụ ndị nne nke ndị egwuregwu bọọlụ, Gerdina nwere mmasị na egwuregwu ahụ wee nyere aka zụlite Donny ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ ọ bụ taa.
Donny van de Beek na nne ya Gerdina.
Banyere ụmụnne nwanne Donny van de Beek:
Dony enweghị ụmụnne nwanyị mana ọ bụ nwanne nwoke nke obere akpọrọ Rody. dị ka Donny, nwanne ahụ malitere ọzụzụ na Veensche Boys mana ọ kwụsịrị dị ka onye na-egwu egwu na nke na-akpali akpali dị ka Donny. Ka o sina dị, Rody bụ otu n'ime ndị Donny kachasị egwu ma soro ya nwee mmekọrịta chiri anya.
Donny van de Beek na nwanne ya nwoke nke obere Rody.
Banyere ndị Donny van de Beek:
Site na obere ezinụlọ Dony amachaghị banyere nna nna ya na nne nne ya yana nne na nna ya ochie. N'otu aka ahụ, ọ ka ga-ekpughe ihe ọ bụla gbasara ndị nne na nna ya na ndị nne na nna ya, mmepe nke gafere ụlọ maka ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Donny van de Beek Ndụ nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Dony Van de Beek akara? nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke ụdị onye ọ bụ iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, Dony's persona bụ ngwakọta nke àgwà Zodiac Aries. Ọ dị obi umeala, dị ike ma mara kpọmkwem ihe ọ chọrọ.
Echere na ọ bụ onye na-adịghị njikere, Donny na-egosi n'ụzọ doro anya banyere nkọwa nke onwe ya na nke onwe ya gụnyere ihe ntụrụndụ dị ka ịnọdụ ọdụ na jakuzzi, na ndị enyi na egwu egwu. O nwekwara mmasị na ejiji, ịkụ ụgbọ na ịkụ ọkpọ.
Donny (nke mbụ si n’aka nri) anaghị ahapụ ohere iso ndị enyi nọrọ.
Donny van de Beek si ebi ndụ:
Ọ bụ ezie na Donny Van De Beek net worth ka na-enyocha, ọ nwere uru ahịa nke 22.50 nde Pound dị ka n'oge ederede. Onye amaokwu nke onye akụ na ụba na-abụghị nke football amaghị, na-ebi ndụ na-etiti ọgbọ, o yikwara ka ọ bụ usoro nke na-egbochi ya ịkwụ ụgwọ karịa ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ya.
Ezigbo uru ụlọ ya dị na Nijkerkerveen ka amatabeghị nke ọma ebe amachaghị banyere nchịkọta ụgbọala ya. N'agbanyeghị na ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọ nwere ike imeli na-efe n'ụgbọelu ma na-amalite mgbe niile ịzụ ahịa.
Donny van de Beek bụ onye na-azụ ahịa mgbe niile ma na-emefu ego n'oge ọrụ dị otú ahụ.
Donny van de Beek Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Donny van de Beek nwata akwụkwọ akụkọ ebe a bụ ụfọdụ ihe ọmụma dị omimi ma ọ bụ nke dị ntakịrị karịa ndị na-esiteghị na ya.
A maghị banyere okpukpe Donny. Ka o sina dị, nsogbu ndị ahụ na-akwado ya ịbụ onye kwere ekwe.
Nne adighi adi nma ma o bu aru. N'ihi ya, o nweghi onye ọ bụla dị ka n'oge ederede.
Donny Van De Beek anọgidewo na-enwe ntụpọ na-enweghị ntụpọ site na nwata ruo ụbọchị. Ebe E Si Nweta: Instagram.
A ka na-ahụ ya ịṅụ mmanya, mmepe nke na-eme ka obi sie ya ike.
Donny van de Beek Biography Video Nchịkọta:
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Donny van de Beek. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.